Real Madrid oo xaqiijisay inuu laacibkeeda Eden Hazard mari doono qaliin looga saarayo… – Gool FM
Real Madrid oo xaqiijisay inuu laacibkeeda Eden Hazard mari doono qaliin looga saarayo…
Ahmed Nur March 26, 2022
(Madrid) 26 Maarso 2022. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa xaqiijisay in laacibkeeda garabka ka ciyaara ee Eden Hazard uu mari doono qaliil maalmaha soo socda si looga saaro shanshada lugtiisa midig biraha isku xirka ee ku jira.
Hazard ayaanan Los Blancos u ciyaarin muddo bil ka badan waxaana markii ugu dambeysay ee uu u saftay naadiga reer Spain ay ahayd 19-kii February ee sanadkan markaasoo uu shan daqiiqo ka ciyaaray kulankii Deportivo Alaves ee uu baddelka kusoo galay.
“Maalmaha soo aaddan, ciyaaryahankeenna Eden Hazard ayaa mari doona qaliin looga saarayo qalabka osteosynthesis plate ee xiriirinayay shanshada lugtiisa midig” ayuu u dhignaa war qoraal ah oo ay Real Madrid ku xaqiijineysay arrintan shalay oo Jimce ahayd.
Si kastaba ha ahaatee, 31-sano jirka reer Belgium ayaa kaliya kusoo bilawday siddeed ka mid ah 21 kulan oo uu tartammada oo dhan u ciyaaray kooxda Macallin Carlo Ancelotti xilli ciyaareedkan, waxaana uu weli ku jiraa waqtigii qarawga noqday ee garoonka Santiago Bernabeu.
"Ciyaartoy badan ayaa doonaya inay nagu soo biiraan, balse ma sameyn doono saxiix halis ku ah dhaqaalaha iyo falsafadda kooxda" - Madaxweynaha Barcelona ee Joan Laporta
Lionel Messi oo ka hadlay qorshahiisa kubadda cagta kaddib Koobka Adduunka ee 2022